Bungee Jumping of Their Own (2001) | MM Movie Store
မငျးသားကွီး လီဗွောငျဟှနျးရဲ့ ၂၁ ရာစု ခတျေဦးက BL ဇာတျကားပါ။၂၀၀၁ ခုနှဈက ထှကျရှိခဲ့တဲ့ ဇာတျကားပဲ ဖွဈပါတယျ။မွနျမာက “အမြှငျ” ဆိုပွီး ပွနျရိုကျခဲ့ပါတယျ။
ထိုငျးကတော့ ၂၀၁၉ ခုနှဈ “Dew”ဆိုတဲ့ နာမညျနဲ့ ပွနျရိုကျခဲ့ပါတယျ။
ပွနျရိုကျထားတဲ့ကားတှကေတော့ မွနျမာမှု၊ထိုငျးမှု ပွုတာ ဖွဈတဲ့အတှကျ မူရငျးကားရဲ့အရသာနဲ့ မတူပါဘူး။ဒီကားမှာတော့ ၁၉၈၀ ဝနျးကငျြက စထားပါတယျ။ဆောအငျဝူးဆိုတဲ့ ကောငျလေးဟာ လီထယျဟီး ဆိုတဲ့ကောငျမလေးကို မွငျမွငျခငျြးပဲ ခဈြမိတယျဆိုတဲ့ အခဈြမြိုးနဲ့ ခဈြခဲ့ပွီး တဈသကျတာပေါငျးဖကျဖို့အထိ ရညျရှယျခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့လညျး ကံကွမ်မာရဲ့လှညျ့စားမှုတှကွေောငျ့ မမြှျောလငျ့ဘဲထယျဟီးတဈယောကျ ဆုံးပါးခဲ့ရပါတယျ။၁၇ နှဈ အကွာမှာတော့ ဆောအငျဝူးဆိုတဲ့ကောငျလေးဟာအိမျထောငျရကျသားကပြွီးကလေးတဈယောကျအဖေ ကြောငျးဆရာတဈယောကျ ဖွဈလာခဲ့ပါပွီ။
ခပျဆိုးဆိုးကြောငျးသားတှရေဲ့အတနျးပိုငျဖွဈလာတဲ့ ဆောအငျဝူးဟာကြောငျးသား-ဆရာ ဆကျဆံရေး အရမျးကို အဆငျပွခေဲ့ပါတယျ။ဒီအခြိနျမှာပဲ ဆောအငျဝူးတဈယောကျ အငျဟှနျဘငျ ဆိုတဲ့ကြောငျးသားတဈယောကျအပျေါကို ကွှမေိသှားပါတော့တယျ။
ဒါတှကေ ဘာကွောငျ့မြားပါလဲ?????ဇာတျလမျးထဲမှာ ကြှနျတျောတို့ ဆကျပွီး အဖွရှောကွညျ့ပါစို့ဗြာ။ဇာတျဆောငျ မငျးသမီး လီအှနျဂြူကတော့ ၂၀၀၄ ခုနှဈမှာ ရိုကျကူးခဲ့တဲ့ The Scarlet Letter မှာ ပါတဲ့ဖျောခြှတျအခနျးတှကွေောငျ့ အိပျမရတဲ့ရောဂါ စှဲကပျခဲ့ပွီး၂၀၀၅ ခုနှဈ ဖဖေျောဝါရီလ (၁၀) ရကျနမှေ့ာ ကိုယျ့ကိုကိုယျ သတျသခေဲ့ပါတယျ။
IMDb 7/10 ရထားတဲ့ ဇာတျကားဖွဈတာမို့ တျောတျောလေးကောငျးတဲ့ ရုပျရှငျထဲမှာ ပါဝငျပါတယျ။
မင်းသားကြီး လီဗြောင်ဟွန်းရဲ့ ၂၁ ရာစု ခေတ်ဦးက BL ဇာတ်ကားပါ။၂၀၀၁ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာက “အမျှင်” ဆိုပြီး ပြန်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်းကတော့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် “Dew”ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ပြန်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။
ပြန်ရိုက်ထားတဲ့ကားတွေကတော့ မြန်မာမှု၊ထိုင်းမှု ပြုတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မူရင်းကားရဲ့အရသာနဲ့ မတူပါဘူး။ဒီကားမှာတော့ ၁၉၈၀ ဝန်းကျင်က စထားပါတယ်။ဆောအင်ဝူးဆိုတဲ့ ကောင်လေးဟာ လီထယ်ဟီး ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကို မြင်မြင်ချင်းပဲ ချစ်မိတယ်ဆိုတဲ့ အချစ်မျိုးနဲ့ ချစ်ခဲ့ပြီး တစ်သက်တာပေါင်းဖက်ဖို့အထိ ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ကံကြမ္မာရဲ့လှည့်စားမှုတွေကြောင့် မမျှော်လင့်ဘဲထယ်ဟီးတစ်ယောက် ဆုံးပါးခဲ့ရပါတယ်။၁၇ နှစ် အကြာမှာတော့ ဆောအင်ဝူးဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာအိမ်ထောင်ရက်သားကျပြီးကလေးတစ်ယောက်အဖေ ကျောင်းဆရာတစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။
ခပ်ဆိုးဆိုးကျောင်းသားတွေရဲ့အတန်းပိုင်ဖြစ်လာတဲ့ ဆောအင်ဝူးဟာကျောင်းသား-ဆရာ ဆက်ဆံရေး အရမ်းကို အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲ ဆောအင်ဝူးတစ်ယောက် အင်ဟွန်ဘင် ဆိုတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်အပေါ်ကို ကြွေမိသွားပါတော့တယ်။
ဒါတွေက ဘာကြောင့်များပါလဲ?????ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ဆက်ပြီး အဖြေရှာကြည့်ပါစို့ဗျာ။ဇာတ်ဆောင် မင်းသမီး လီအွန်ဂျူကတော့ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ The Scarlet Letter မှာ ပါတဲ့ဖော်ချွတ်အခန်းတွေကြောင့် အိပ်မရတဲ့ရောဂါ စွဲကပ်ခဲ့ပြီး၂၀၀၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၀) ရက်နေ့မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေခဲ့ပါတယ်။
IMDb 7/10 ရထားတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်တာမို့ တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။